एजेन्सी – पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका खेलाडी हुन् इजिप्ट तथा लिभरपुलका फरवार्ड मोहमद सलाह । गत सिजन रोमाबाट लिभरपुल पुगेका उनले प्रिमियर लिगमा गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
सन् २००९ बाट व्यावसायिक फुटबल यात्रा शुरु गरेका सलाहले २०१३/१४ र सन् २०१५ को दुई सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिग खेले । पहिलो सिजन १० खेलमा सहभागिता जनाएका उनले दोस्रो सिजन तीन खेल खेल्दै लोनमा इटालियन सिरी–ए खेल्न फिओरेन्टिना पुगे । २०१५–१६ को सिजन उनी पुनः सिरी–ए कै अर्को क्लब एएस रोमा पुगे । रोमामा उनले ३४ खेल खेल्दै १४ गोल गरेका थिए । २०१६–१७ को सिजन रोमामा नै अनुबन्ध भएका सलाह गत सिजन लिभरपुल आएका हुन् ।
गत सिजन प्रिमियर लिगमा लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिगसम्म पुर्याउँदा सलाहले ३६ खेल खेल्दै ३२ गोल गरेका थिए । लिभरपुलका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सलाह प्रिमियर लिगको प्लेअर आफ द इयर समेत बने । सलहाका लुकेका छ तथ्य यस्ता छन् :
१. कठिन सुरुवात
मोहमद सलाह भन्ने बितिक्कै जति सजिलै अहिले हामी चिन्छौ त्यती सजिलो उनको कहानी छैन । युवा अवस्थामा उनले १० वटा अलग बसबाट दैनिक ८ घण्टा यात्रा तय गर्दथे । उक्त यात्रा उनले हप्तामा पाँच दिन गर्नु पर्दथ्यो । सलहाले चार वर्ष सम्म निरन्तर यस्तो कठिन यात्रा गर्दै फुटबल प्रशिक्षण नियमित लिएका थिए ।
२. इजिप्टका गहना
सन् २०१४ मा फुटबलका लागि सलाहको भविष्यमा प्रश्न आयो । उनलाई अन्य राष्ट्रमा रहेर फुटबल खेल्न विशेष अनुमति आवश्यक पारेको थियो । सामान्य नागरिकको नियम अनुसार उनले एक वर्ष भन्दा बढि समयका लागि सेनामा सेवा गर्नका इजिप्ट फर्कनु पर्ने थियो । अन्तराष्ट्रिय रिपोर्ट अनुसार एजिप्टका प्रधानमन्त्रीले उनलाई सेनाको सेवाबाट छुटकरा दिए । उनले आफ्नो फुटबल यात्रालाई सहज रुपमा अगाढि बढाउन सकुन र इजिप्टको नाम विश्वभर प्रचलित होस् भन्ने उनको चाहना थियो ।
३. समाजसेवी सलाह
एक राम्रा खेलाडी मात्र हैनन् । उनी एक समाजसेवी समेत हुन् । १५ मिलियन युरो पर्ने आफ्नो घर उनले सहरमा भएका गरिब तथा विपन्न वर्गकालाई बस्न दिएका छन् । उनले लाखौ पाउण्डको स्कुल समेत बनाएका छन् । स्थानिय अस्पतालमा एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने उनले सहरका विभिन्न बालबालिकालाई नियमित सहयोग गर्दै आएका छन् ।
४. सलाह र चोर
एक दिन चोरले सलाहको घरमा चोरी गर्यो । त्यसबेला उनी मैदानमा खेलिरहेका थिए । केही दिन पछि पुलिसले अपराधी पक्राउ गरे । उनका बुबाले अपराधिविरुद्ध उजुरी पनि दायर गरे । तर, सलाहले आफ्ना बुबालाई उक्त उजुरी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरे । उनले चोरसँग भेटे र उनलाई सुधार गर्न उनका लागि काम समेत खोजिदिए ।
सलाह एक अनुशासित खेलाडी हुन् । उनको नैतिक गुण मैदान बाहिर मात्र नभई मैदान भित्र पनि फैलिएको छ । गत सिजन प्रिमियर लिगमा उनले ३६ खेलमा मात्र १४ फाउल गरेका थिए र उनलाई एक पटक पनि रातो कार्ड पाएका थिएनन् । सामान्यतय उनले गरेको फाउल विपक्षी छिटो बल खोस्दा हुने गर्दछ ।
६. अभिनेताका प्रशंसक
सलाह इजिप्टका अभिनेता खालद एल नाबावेका ठुला प्रशंसक समेत हुन् । उनले किंडम अफ हेभन, मिसन इम्पोसिबल र फियर गेम जस्ता फिल्मा कयौं हलिउड स्टारसँग अभिनय गरेका छन् । सलाह लियोनार्दो डी काप्रियोको प्रशंसक पनि हुन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५०८:४६
अर्जेन्टिना र आइसल्यान्डबीच भिडन्त हुँदै: कसले जित्ला ? यस्तो अनुमान र यी हुन् हेर्नलायक खेलाडी
बिराटनगर किङ्समा दुई भारतीय खेलाडी !
नेपालको विश्वकप छनोट यात्रा: अवसर र चुनौती उत्तिकै !
‘बागी ३’ मा टाइगर र श्रद्धा जोडी दोहोरिने पक्का !
मेस्सीविनाको बार्सिलोनाको सेभियासँग हार
२० रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल समूह विजेता ! थाइल्याण्ड ए ९ विकेटले पराजित !